မနက်စောစော ဘာကြောင့် အိပ်ယာထသင့်သလဲ???????မနက်စောစောထပါလို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ~ Myanmar Online News
မနက်စောစော ဘာကြောင့် အိပ်ယာထသင့်သလဲ???????မနက်စောစောထပါလို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
6:43 PM ကျန်းမာရေး No comments
မနက်ခင်းစောစောလေးထ၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ရေချိုး၊မနက်စာစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်က စိတ်ရော ကိုယ်ပါလန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။ လုပ်စရာတွေကိုစောစောစီးစီနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့လည်း အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ မနက်ခင်းနေရောင်ခြည်နဲ့ မနက်ခင်းရဲ့ သန့်စင်တဲ့လေနုအေးတွေက ခန္ဓါကိုယ်အတွက်တော်တော်လေး အထောက်အကူပြုပေးနေတာပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မနက်ခင်းစောစောထတာကကောင်းတယ်လိုပပြောချင်နေတယ်ဆိုတာ သိလောက်ရောပေါ့……..
စောစောအိပ်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေစားမိနိုင်ခြေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စောစောအိပ်သူတွေကပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန်ရရှိမှုနဲ့အတူ အဆီများပြီး အငန်ကဲတဲ့ အသင့်စားအစာအစာတွေကို စားမိနိုင်ခြေနည်းတာကြောင့် နှလုံးရောဂါခံစားရနိုင်ခြေနည်းစေနိုင်ပါတယ်။
ညကိုစောစောအိပ်ပြီး မနက်စောစောထသူတွေက အစာခြေစနစ်ပြဿနာကင်းကြသလို ဆီး၊ဝမ်းလည်းမှန်ပါတယ်။ မနက်တိုင်းဝမ်းမှန်မှန်သွားလို့ အစာခြေစနစ်ပြဿနာကင်းဖို့ဆိုရင် ညဘက်ကိုစောစောအိပ်ဖို့လိုမယ်နော်။
မနက်စောစောထလေ့ရှိသူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်ခြေနည်းကြပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာနေရောင်နုနုလေးနဲ့ ထိတွေ့တာ၊ကျေးငှက်လေးတွေရဲ့ အသံလေးတွေကို နားထောင်ရတာက စိတ်ကြည်လင်စေပြီး အကောင်းမြင်စိတ်များစေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်များတဲ့သူတွေက စိတ်ကျေနပ်မှုအမြင့်မားဆုံးရရှိသူတွေဖြစ်ကြပြီး စိတ်ဓါတ်ကျမှုနဲ့ ခပ်ကင်းကင်းနေနိုင်ကြပါတယ်။
မနက်ခင်းမှာ မနက် ၅ နာရီ ခွဲကနေ ၆ နာရီအတွင်း အိပ်ရာနိုးထမှုက ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီတော့ ညဘက်ကို ညဉ့်နက်မခံဘဲစောစောအိပ်လို့ မနက်ခင်းကိုလည်းစောစောထဖို့ပြောပါရစေ………
Source : Helloဆရာဝန် Ref : Aye Thi Mon / Dr. Thurein Hlaing Win #Myanmar_Online_News
မနက်ခင်းမှာ မနက် ၅ နာရီ ခွဲကနေ ၆ နာရီအတွင်း အိပ်ရာနိုးထမှုက ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီတော့ ညဘက်ကို ညဥ့်နက်မခံဘဲစောစောအိပ်လို့ မနက်ခင်းကိုလည်းစောစောထဖို့ပြောပါရစေ………………..